David Luiz: Barcelona Way Na Maamushay
HomeChampions LeagueDavid Luiz: Barcelona Way Na Maamushay
David Luiz ayaan muran gelinin in kooxdiisa si fiican loo garaacay, isla markaana lagu bahdilay garoonka Camp Nou markii ay Barcelona ku garaacday 2-0, taas oo marka la isku celceliyo labadii lugood ee ay wada ciyaareen PSG iyo Barca ee labada garoon ay ciyaartoodu noqonayso 5-1 ay guushu ku raacday Barcelona.
Difaacyahankan reer Brazil oo ciyaarta kadib u warramay ITV ayaa waxa uu yidhi: “Way naga fiicnaayeen labadii ciyaaroodba, waanay na maamuleen labada kulanba, in ay soo baxaana ay way u qalmaan.
“Ciyaar fiican maanaan ciyaarin (caawa), fursado maanaan abuurin sidii kulankii hore. Si fiican umaanaan ciyaarin, laakiin waxa aanu helnay toddoba ama siddeed fursadood oo aanu goolal ku dhalin karaynay.” Sidaas ayuu yidhi Luiz.
David Luiz waxa uu amaanay labada weeraryahan ee Barcelona ee Neymar iyo Luis Suarez, kuwaas oo uu sheegay in ay samayn karayaan waxa ay doonayeen, isla markaana ay si fiican u fahmeen ciyaarta Barcelona.
Luiz waxa uu diiday eedaymo loo soo jeediyey kooxdiisa oo sheegayey in iyadoo lacag badan la geliyey haddana ay awoodi kari la’dahay in ay Siddeedda soo dhaafto, taasna waxa uu Luiz ku tilmaamay in khibrad lagaga badiyey ee aanay ahayn diciifnimo kooxdiisa haysata.
Stoke City vs Chelsea 0-4 – Highlights & Goals
Xasan Waraabe-cadde Oo Dareen Qiiro Leh Kaga Jawaabay Garoomo Carruureed Oo Uu Booqday
Bayern Munich Oo Man City Uga Hadhay Alexis Sanchez